မင်နဲရိုး နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ ကော်စတာ ၊ အချုပ်ကလွတ်လာတဲ့ မန်ဒီ ၊ အလွတ် နဲ့ ရမယ့် ဆန်းချက် တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
မင်နဲရိုး နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ ကော်စတာ ၊ အချုပ်ကလွတ်လာတဲ့ မန်ဒီ ၊ အလွတ် နဲ့ ရမယ့် ဆန်းချက် တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှူးဟောင်းကြီး ဒီယေဂို ကော်စတာ ဟာ ဘရာဇီး ကလပ် အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး အသင်း နဲ့ စာချုပ်ကို ၂ ဦး ၂ ဘက် သဘောတူ ဖျက်သိမ်း လိုက်ပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
ကော်စတာ ဟာ မင်နဲရိုး မှာ ၆ လကြာ ကစားခဲ့ပြီး ဘရာဇီး အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ ဆု နဲ့ ရှုံးထွက် ဖလား တို့ကို ရယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ မှာတော့ ကော်စတာ ဟာ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူလို့ ရနိုင်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ ပါပြီ ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့် တရားရင်ဆိုင် နေရပြီး အကျဉ်းချ ခံထားရတဲ့ မန်စီးတီး နောက်ခံလူ ဘင်ဂျမင် မန်ဒီ ကို ယမန်နေ့က ခံဝန်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်ပြီး အမှုတွေ ကြားနာမယ့် နေ့ကို စောင့်ဆိုင်း ထားစေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ဟာ နယူးကာဆယ် ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားတဲ့ ထရစ်ပီယာ ရဲ့ နေရာ အတွက် အာဆင်နယ် နောက်ခံလူ ဆီဒရစ် ဆိုရက်စ် ကို စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြ ကွန်တီ ကတော့ သူ့ အနေနဲ့ စပါး အသင်းနဲ့ ရေရှည် စီမံကိန်းတွေ အကောင်အထည် ဖော် နိုင်ဖို့ အတွက် စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ ကို လိုလား နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် နည်းပြ အာတီတာ ကတော့ အသင်းမှာ လာရောက် လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ် နေတဲ့ ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဝီလ် ရှိုင်းယား ကို ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစား ထားခြင်း မရှိကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မနေ့ ညက ကစားသွားခဲ့တဲ့ FA Cup တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ် မှာတော့ မန်စီးတီး ဟာ ဆွင်ဒန်တောင်း အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၄-၁ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး နောက်တဆင့်ကို တက်လှမ်း သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
စီးတီး ဟာ တောင့်တင်းတဲ့ လူစာရင်း နဲ့ ပွဲထွက် လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း မှာတော့ လူငယ်တွေကို လူစားလဲ ထည့်သွင်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲမှာ ပွဲထွက်ကစား ခဲ့ပြီး ဂိုးလည်း သွင်းယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ စီးတီး လူငယ်လေး ကိုးလ် ပယ်လ်မာ ကတော့ သုံးသပ်သူတွေ ရဲ့ ချီးကျုးမှု ကို ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။
ဘွန်ဒစ်လီဂါ မှာတော့ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ဟာ မိုချန်ဂလာဘတ် အသင်းကို ၂-၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီး ဒေါ့မွန် ကို အမှတ် ကပ်လာ စေဖို့ အခွင့်အရေး ပေးသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူး အလက်ဆစ် ဆန်းချက် ရဲ့ စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းပေးပြီး အလွတ် နဲ့ ထွက်ခွာခွင့်ပြု ဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေပြီး လာရောက် ကမ်းလှမ်းမယ့် အသင်းတွေကို စောင့်ဆိုင်း နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အပါအဝင် အသင်းအချို့ နဲ့ အသံ ထွက်နေတဲ့ ဘရူနို ဂွီမာရက်စ် အတွက် ယူရို ၄၅ သန်း မရရှိ ပါက စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လိုင်ယွန် အသင်းက အသိပေး ထားတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒေါ့မွန် CEO ဝက်ဇ်ကီ ကတော့ တိုက်စစ်မှူး အာလင်း ဟာလန်း ဟာ ဒီဇန်နဝါရီ မှာ အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ ဖို့ အကြောင်းအရင်း မရှိဘူးလို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆို သွားခဲ့ ပေမယ့် လာမယ့် ရာသီ အတွက် ဆိုရင်တော့ ဟာလန်း ကို ဆက်ထိန်းထားဖို့ ခက်ခဲ နိုင်ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် ကနေ ထွက်ခွာ လိုတဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ လူးကပ် ဒင်း ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်း ၃ သင်း နဲ့ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ် နေပြီး လာမယ့် အပတ် ထဲမှာ အရေးပါတဲ့ ရွေးချယ်မှု ကို ပြုလုပ်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ကတော့ ပထမအကြိမ် ကြိုးစားမှု ပယ်ချ ခံခဲ့ရတဲ့ နယ်သာလန် နောက်ခံလူ စဗန် ဘော့မန်း အတွက် ဒုတိယ အကြိမ် ကမ်းလှမ်းမှု ကို လိုင်လီ အသင်းထံ ပေးပို့လိုက်ပြီ လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ဟာ ဝက်စ်ဟမ်း နောက်ခံလူ အစ်ဆာ ဒီယော့ ကိုလည်း ပေါင် ၁၀ သန်း လောက်နဲ့ ရရှိပါက ခေါ်ယူ သွားဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
Previous Article ယနေ့ည ချက်စတာဖီးလ်နဲ့ အက်ဖ်အေ ဖလားပွဲကို ဘယ်သူတွေ လွဲချော်မလဲ ဆိုတာ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ တူချယ်
Next Article နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ စမစ်ရို ကို ဘာကြောင့် ပွဲထွက် အသုံးမပြုတာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ အာတီတာ